Ny Saina mena ao An-Tserasera Olona ny Hafatra Nancy Nichols
Diniho tsara ny feo. Dia ny teny ratsy sy mitaraina? Izany famantarana izy no jaded, izy efa tezitra olana ny taloha, na izy tsotra tsy fanajana ny vehivavy. No izy dia hiezaka mafy loatra ny volana ny anao. Izy dia iray ulterior antony dia mpilalao, scammer na serial dater. No mirehareha, ary hirehareha? Izany no mariky ny tsy fandriampahalemana, na ny saina mena iray tena variana narcissist. Na izany na tsia, dia mila mandalo eo aminy. Izy no manjavozavo momba ny maha izy azy sy ny lasa? Izy no nanafina zavatra, dia angamba mety vadiny na sipany, olana ara-bola na jillion hafa manokana ny olana. -Tsipika ambany, raha ny lehilahy iray no hafatra pings gut, fa ny zavatra manindry mandry miezaka mampitandrina anao, bandy ity mety ho vaovao ratsy. Fa lazaina, misy vao nisara-panambadiana sy ny maty vady tsara ny olona ao amin’ny toerana fiarahana izay tena mitady vehivavy izay hizara ny fiainany. Izy ireo tsy mitondra ny datin ao ny taona maro, ary izy ireo dia mety tonga eny toy ny rano sy votsavotsa eo amin’ny mailaka sy hafatra an-tsoratra. Hanome ry zalahy ireo fahafahana mba hanaporofoana ny sira talohan’ny mitsara. Ireto ny sasany ny hafatra vao haingana avy amin’ny lehilahy izay insincere, ny tsy marina, ary ny mpiremby sy ny fomba aho namaly. Izy no tsara tarehy ny ampy sy ny bio dia toa manan-tsaina. Nandefa email taminy aho indray ary izy tsy nangataka mba hihaona amiko, dia tsy niteraka andianà miresaka hafatra. Vehivavy, raha tsy hoe te-penina-pal, milaza ilay lehilahy, izay rava ny fotoana amin’ny tsy misy farany mailaka, misaotra fa tsy misy fisaorana. Manomboka Eo, nandefa hafatra ho ahy roa -tsiny, nanontany ahy no tiako mba hahandro sy ny zavatra dia ny olona tena tiany ny zavatra nahandro ary avy eo nanasa ny tenany nandritra ny trano ho an’ny an-trano-sakafo masaka.»Tiako ny miezaka ny fandrahoan-tsakafo, dia mety ho tsara kokoa noho ny naka ahy tany amin’ny trano fisakafoanana, dia afaka mitondra ny toerana tena zava-pisotro ny anao raha tianao.’ Namaly aho hoe:»FYI: tsy mahalala fomba na mety hanontany ny tenanao ho amin’ny sakafo hariva teo ny fivoriana voalohany. Na faharoa na fahatelo. Miandry ny vehivavy iray manasa anao hatrany. Mirary anao ny tsara indrindra ao an-dalana.»Ny mpisolovava ny Lehilahy ary nihaona ho zava-pisotro, ary efa mahafinaritra ny fotoana ary avy eo dia tsy hihaino azy indray. Herinandro taty aoriana izy, ary naniraka ahy ny hafatra an-tsoratra, Hi, tianao ve ny hiara-miasa indray.»Azo antoka,»hoy aho namaly.»Nihevitra aho fa tsy nahazo miaraka mahafinaritra.»Tsy nandre niverina avy izy efatra herinandro taty aoriana izy, ary naniraka ahy ny mpifankatia fiarahabana. ‘Hi tsara Tarehy ny, izany dia noho ny masonao ihany, tiako fotsiny ianao mba hijery izay mijery toy ny ao ireo akanjo vaovao. Aoka aho hahafantatra ny zavatra ianao mieritreritra fa rehefa mijery ny pics. Eto dia ny fifandraisana mifanaraka nanome ahy, ka ianao afaka hijery ny pics, satria ny vahaolana dia be ho an’ny lalao. Hitondra fa mitsikia, tia azy.»Ora iray mialoha ny hariva ny fivoriana, dia nanoratra e-mail,»Nancy, dia mila mizara izany ny hariva. Azonao atao ny zoma na asabotsy.»Nanaraka azy,»namela Fotsiny ny birao. Manantena ianao tsy ho tezitra. Tena no te-hihaona aminao.»Ny minitra farany fanafoanana dia tsy mahalala fomba sy tsy azo ekena. Nandefa email taminy aho,»hoy i Tom. Tsy misy.
Fa nitodika aho ny fanasana hihaona aminao sy ny fanafoanana ny adiny iray mialoha ny daty dia mety hiteraka olana. Nancy.»Niala-tsiny izy ary angataho izy ireo mba hihaona amiko ny herinandro manaraka, ka nanao hoe,»tsy Afaka miandry. Ok, aho, dia ho any. Mampanantena aho. Ny andro ny fivoriana izy nanoratra e-mail tamiko,»miala tsiny aho, tsy handeha aho mba ho afaka manao izany ny hariva.»Con mpanakanto tianao avy hatrany handeha IM (hafatra), ary mahazo ny mailaka manokana sy ny nomeraon-telefaonina. Izy ireo dia te mba hahazoana fampahalalana manokana momba anao haingana, noho izany izy adapts ny resaka mba hihaona ny zavatra ilaina, taratra ao am-ponao sy hifehy anareo. Barry nanoratra e-mail,»Ny mombamomba nisongadina tao anatin’ny andro ny famandrihana. lehibe pics ianao tena vehivavy tsara tarehy. Nanapa-kevitra ny handefa anareo ity hafatra fohy. Aho tsara tarehy aho, lava, lehilahy, ara-bola azo antoka, dia efa niaina izany rehetra manerana izao tontolo izao. Tiako mba ho fantatrao bebe kokoa sy tsara kokoa, saingy izaho dia tsy fanavaozana ny famandrihana. Raha tsy an-tsaina Eto dia ny ID eo Yahoo IM (sakana) aza misalasala mandefa amiko amin’ny sakana yahoo. Dia miandry ny valiny avy aminareo. Manana ny andro lehibe. Barry’ Donald nanoratra,»Miarahaba, manantena aho fa izany mailaka dia mahita anareo amin’ny tsara ara-pahasalamana. Aho tao an-tserasera amin’izao fotoana izao sy momba ny famaranana ny kaonty aho satria efa nahazo ny fiainana mpiara-miasa eto amin’ny lalao mampiaraka, fa rehefa ny havany nahita ny mombamomba ny maha-izy raha ny marina dia mijoro ao ambadiky ny ahy, efa manerana ahy momba ny fahazoana mifandray aminao. Hoy izy hoe anao toy ny vehivavy izy dia te-hahafantatra tsara kokoa. Velona izy ao amin’ny faritra misy anao ary izy no eto ihany, fa ny fitsidihana. Tsy mila manoratra indray eto aho raha ho deactivating ny kaonty eo amin’ny toerana. Ny mailaka mivantana dia Jamestown amin’ny GMAIL C O M manantena aho fa mahazo mifandray aminy ary mampanantena anareo aho fa tsy tsy hanenina na inona na inona. Ny manafana lafiny izay. Donald»Alpha olona tsy manana sary ary mandefa ny: Hi, ianao no tena tsara tarehy, ary te-hahafantatra anao tsara kokoa. Allen lehilahy raha tsy misy sary tsy mendrika valinteny, fa raha mahatsapa ianao dia tsy maintsy, dia afaka mamaly hoe,»izaho dia mankasitraka ny hafatra, fa tsy manome avy ny mailaka manokana amin’ny olon-kafa na ny taratasy ny olona tsy misy sary. Tsy mamoaka sary, na ireo lahatsoratra sandoka sary, na ny sary dia mazava fa mitondra ny datin’, maizina, na mason’ny (tsy mila na iza na iza manaiky azy izy.) Izy ireo dia vonona ny hanome fanampiny sary, milaza tsy manana amin’izao fotoana izao ny sary. Izy ireo dia hafatra ianao eo amin’ny toerana mampiaraka ary rehefa tsindrio ny mombamomba azy mba hijery azy avy, izy dia efa miafina ny mombamomba azy ka tsy misy afaka mahita azy. Izy ireo hanenjika ireo vehivavy izay miaina any amin’ny faritany hafa. Izy dia milaza aminareo izy ny hifindra any amin’ny toerana akaiky anao izy, ary ny fahazoana ny»hitsambikina-manomboka»ny vaovao fiainana ara-tsosialy. Izy no nihavian’ny lavitra raharaha mba hanafina ny fanitsakitsaham-bady. ‘Hi, Manantena ity mahita anao manao tsara. Sary tsara tarehy ianao. Miala tsiny aho tsy manana ny iray, ary tsy vita ny mombamomba azy. Nanapa-kevitra ny tsy noho ny toerana misy ahy any amin’ny banky. Fa dia faly mailaka ianao ny iray. Raha mba izaho, fara fahakeliny, mihevitra ny tenako. Ny anarako dia John. Efa ao amin’ny banky ny telo-polo taona. Izaho tokana fotsy lahy taona. Tsy nanambady, tsy hita indray ny iray ary rehefa mahazo taona izay mahazo sarotra ny mahita. Mainty ny volo, ny sasany ny volo avy eo. Manga maitso ny masony. Tsy mpifoka sigara. lava, Mafy, feo, fanatanjahan-tena, ny hozatra vatana, — batana be tratra, be pecs lol. Izaho tia milomano, miasa avy, ny vato sy ny rano ny vato, snuggle, hamihina, fanorana, mafana tubs, ny vakiteny, ny sarimihetsika, ny tantara, ny tranom-bakoka zavakanto, mozika, ny faran’ny herinandro getaways, tsangatsangana, fanatanjahan-tena, ny masoandro, ny rano, izaho no mahasarika ny taona matotra ny vehivavy, dia milamina kokoa, mora ny miresaka sy mahalala ny zavatra tiany. Izaho momba ny ora avy Louisville. Fitiavana avy eo an-tanàna, ny fanantenana mba hihaino avy aminao. Amim-pahatsorana Jaona xoxo: Aza, nandefa ny taona rehefa dimy amby enim-polo mijery ny iray sola headshot izy dia manosika ny. Ny lahatsoratra dia teny tsy misy andinin-tsoratra iray aina (miala aina.). Niezaka mafy mba handresy lahatra ahy izy dia nanan-karena, mahomby, nanan-kery ny olona. (Efa condensed ny tena verbose mailaka.)»Izaho misotro ronono orinasa mpanatanteraka sy ny maty vady vao haingana, mahaleo tena ara-bola, miaraka amin’ny fonenana ao Nashville TN Denver CO, izay tia ny fitsidihana izao tontolo izao ny tanàna lehibe, ary manana ny rindran-kira, ny tranom-bakoka zavakanto, ny sarimihetsika, ny teatra, tsara ny trano fisakafoanana, isan’andro workouts sy ny andro fiakaran’ny. Tena pianakaviana miompana amin’ny telo mahomby ny ankizy rehetra Ivy Leaguers amin’ny diplaoma, izay rehetra indrisy anefa fa velona eo Andrefana — Tsiraka, izay no mahatonga ahy foana ny toerana ao Portland. Izaho no tena tsara vintana avy amin’ny ara-bola inona no lazain’ny tao an -taona ny orinasa fiainana ka mino tanteraka aho fa eo amin’ny fanomezana indray ankehitriny ny fiantrana, ary koa ny zanako sy ny sahirana ny havany. Tsapako mafy ny ray aman-dreny raibe sy renibe, raha amin’ny rehetra ara-bola izay azo atao, tokony handoavana ny saram-pianarana ho an’ny zanany ireo zafikelinay, ary tokony ho nanampy ny lehibe ara-pahasalamana ny fandaniana ary na dia omena fanampiana amin’ny fividianana ny trano, sns. fa toy ny Warren Buffett, mino aho fa ny ankizy zafikeliny tokony homena handova afa-tsy ampy ny vola mba ho afaka miasa amin’ny asa ao izay te-hiasa izy ireo, ary tsy be loatra ny vola, fa izy ireo dia very ny antony manosika ny asa. Mino koa aho fa ao anatin’ny fialan-tsasatra mandray karama ho an’ny ray aman-dreny’ ny raibe sy renibe. Ny fianakaviana no fanao isan-taona ririnina vakansy any Hawaii, ary ireo tia fahatsiarovana ny fianakaviana fialan-tsasatra efa hita tamin’ny fanadihadiana natao tamin’ny alalan’ny bebe Kokoa Tsara ny Siansa Foibe mpikambana ao amin’ny Psikolojia Departemantan’ny Cal-Berkeley mba hamorona lavitra fahasambarana noho ny fanangonan-karena ny fiara lafo vidy sy ny toy izany.
Izaho no tena tanora tokoa aho amin’ny alalan’ny lavitra ny tranainy iray ao amin’ny vondrona ara-tsosialy (taona ny dimy amby efa -) noho ny tsy manana ny ankizy mandra-pahatonga ny tara s tany am-boalohany s. ASA VAOVAO farany: Rehefa afaka dimy taona. feno ny fisotroan-dronono, vao nanaiky ny dolara iray taona part-time job amin’ny maha-Mpanolotsaina Ambony ny maharitra lehibeny mpanoro hevitra (iray amin’ireo Nashville ny mpitarika philanthropists).»Ianao tsy azo antoka momba ny marketability toy ny nisara-bady na maty vady vehivavy? Tiako mba hanampy anao hahatakatra ny ankehitriny fitsipika ny mampiaraka.
Aoka ny hiresaka
← ChatRoulette Belzika free Belza amin'ny RouletteChat.ho
Arabo Mampiaraka, Chat Room, Ny Vehivavy, Ny Lehilahy, Ny Silamo Mampiaraka Amin'ny Chat →